Fedora 28 Tilmaamaha Rakibaadda Tallaabo-Tallaabo | Laga soo bilaabo Linux
Fedora 28 Tilmaamaha Rakibaadda Tallaabo-tallaabo ah
Ka dib markii si rasmi ah loo sii daayay nooca cusub ee Fedora 28 Kuwaas oo aan halkan uga faalloonayno baloogga, inbadan oo kamid ah adeegsadayaasheeda ayaa bilaabay guuritaanka Fedora 27 illaa nooca cusub.
In kastoo waxaan heysanaa ikhtiyaar aan ku sameeyno iyada oo aan dib loo rakibin, waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in lagu rakibo xoq oo lagu daray dhammaan isticmaaleyaasha cusub waa inay ku dhacaan, iyoTaasi waa sababta aan idinla wadaageyno tusahan rakibida fudud.
Tilmaamahan waxaa loogu talagalay dadka cusub, oo lagu daray isbeddelo qaarkood ayaa lagu sameeyay habka rakibidda taas oo ka dhigaysa mid si sahlan ugu habboon.
1 Soo dejiso oo diyaarso raashinka Qalabka dhexdhexaadinta
2 Sidee loo rakibaa Fedora 28?
Soo dejiso oo diyaarso raashinka Qalabka dhexdhexaadinta
Sidee loo rakibaa Fedora 28?
Horeyba qalabkayaga rakibida ayaa loo diyaariyay, waxaan sii wadaynaa inaan ku xirno kumbuyuutarkayaga kaas oo soo bandhigi doona shaashadda soo socota haddii aan fulino hawsha duubista sawirka nidaamka si sax ah:
Waxaan dooran doonaa xulashada koowaad waana inaan sugno intaan ku shubanayno wax kasta oo lagama maarmaan u ah bilaabida hawsha rakibaadda.
Sidan tan ayaan in yar sugeynaa, iyo shaashad kale ayaa soo muuqan doonta taas oo na siineysa ikhtiyaarka aan ku tijaabin karno nidaamka adigoon rakibin (Live Mode) ama ikhtiyaarka aan ku bilaabi karno nidaamka rakibida.
Waxaan riixi doonaa rakib iyo Qoryaha Degdega ah ayaa furi doona saaxirka rakibidda Fedora.
Halkan Waxay na weydiin doontaa inaan xulno luuqadeena iyo waliba dalkeena. Marka tan la sameeyo, waan sii wadeynaa.
Haddii aad waligaa ku rakibtay Fedora qaababkii hore, waxaad ogaan kartaa in rakiyuhu hadda haysto kaliya fursado yar.
Halkan kaliya waan saxi doonaa aagayaga waqtiga haddii loo baahdo.
Haddayna ahayn oo keliya waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka "Meel u socota rakibidda"
Halkan waa wuxuu ina siinayaa suurtagalnimada in aan dooranno habka loo rakibayo Fedora:
Masax diskka oo dhan si aad u rakibto Fedora
Annaga qudheennu waxaan maareynaa qormooyinkeenna, xajineyno diskiga adag, tirtirnaa qaybaha, iwm Ikhtiyaarka lagu taliyay haddii aadan rabin inaad lumiso macluumaadka.
Halkaas ka dib waxaan dooran doonaa xijaab aan ku rakibeyno Fedora ama waxaan dooran doonnaa disk adag oo dhameystiran. Haddii ay dhacdo in la doorto qayb, waa inaan siino qaab ku habboon, oo sidan ku sii haray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Fedora 28 Tilmaamaha Rakibaadda Tallaabo-tallaabo ah
Si loo sii wado soo saarista xalalka furan ee furan iyada oo aan wax kormeer ah la sameyn, waxay noqon doontaa mid wax tar leh tan iyo markii sirdoonka macmalka ah uu sii wado inuu horumariyo oo waqti kacaankii iyo awooddii kumbuyuutarradu ay bani'aadamnimada ku dhici karaan ...
Jawaab Miguel Cisneros
Hada fiiri, dhibaato ayaa i haysata, waxay dhacdaa inaan ka soo dejiyo iso 28 ee linka bogga madaama qoraalka fedora kaliya aan helayo 26 waxaan xushay ikhtiyaarka si aan u habeeyo si aan u doorto sawirka iso 28 ee aan soo dejiyo waan qorayaa oo howsha oo dhami waa caadi oo way fiicantahay si kastaba ha noqotee markaan tago si aan u rakibo waxaan ogaadaa in iso uu burburay .. kiiskan maxaan sameyn karaa?
Isku day daadinta iyo hubinta MD5 si aad u xaqiijiso in ISO uusan musuqmaasuqmin.